Tandoor avy amin'ny biriky amin'ny tanany: fomba fanaovana, fampianarana, sary - Foto-drafitr'asa - 2019
Manangana tandoor ao amin'ny dacha izahay
Ny fitsaharana rehetra eto amin'ny firenena dia tsy afaka manao izany raha tsy misy kebabs mamy sy mamy ary mahasalama. Inona no mety ho tsara kokoa noho ny voankazo, voatoto eo amin'ny hena, voamaina amin'ny saosy matsiro? Ny valiny dia tsotra - akoho amidy ao amin'ny tandirire - foiben-javamaniry fahiny, izay ahafahanao manao sakafo matsiro maro. Noho izany dia manolo-tanana ny hanangana tandroka amin'ny tananao manokana ianao, indrindra fa ny fahatsoran'ny fanorenana dia mahatalanjona fotsiny.
Ahoana no ataon'ireo tandirire
ny vilany tany na
Fitaovana sy fitaovana ilaina
Sakafo izay azo amidy amin'ny tandir
Inona ny tandroka ary nahoana no ilaina izany?
Tandoor dia tandindom-bary miendrika voatokana manokana, izay natao hanina. Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny tanimanga, izay manana hery hafanana sy hafanana hafanana. Noho izany dia manomboka mihamitombo tsikelikely ny oven, ary mampitsahatra ny hafanana amin'ny sakafo mahavelona.
Fantatrao ve? Ny dipoavatra voalohany dia niseho tamin'ny taonjato faha-10 tamin'ny taona lasa teo amin'ny faritanin'i Azia afovoany. Ny lavenona fanokafana dia nisy tany - nisy lavaka nolalorina tao anaty tany ary misy diamondra ny 0,5 m ary 0,35 m ny haavony, ary napetraka teo amin'ny ilany ny lavadin'ny rivotra.
Tandoor dia manana tombony lehibe raha oharina amin'ny fitaovana hafa mitovy amin'izany:
Ny fikarakarana mahandro dia mila fotoana fohy kokoa: ohatra, tapakila sotro lehibe iray dia ho vita 20 minitra eo ho eo;
Tsy ilaina ny mifehy ny fizotran'ny fikarakarana ny fotoana rehetra, satria ny zavatra rehetra ilaina dia ny mametraka ny sakafo ao anaty lafaoro ary avy eo alaivo aorian'ny fotoana iray;
ny habetsahatry ny hazo ilaina hikarakarana sakafo;
Ny habetsaky ny fampiasana, satria ity oven ity dia ahafahanao manamboara karazan-tsakafo isan-karazany: hena, piso, legioma, ankoatra izany, afaka mahandro katsaka ianao ary manamboatra dite mihitsy aza.
Ianaro ihany koa ny fomba fanaovana vy-it-it-yourself brzier vita amin'ny metaly sy biriky.
Ny tombontsoa lehibe amin'ny tandoor dia ny fahafahana mahandro tsy ampiasaina amin'ny solika sy ny tavy, izay tena manan-danja tokoa ho an'ireo izay manaraka ny fitsipiky ny sakafo mahasalama.
Ny fitsipika mifehy ny fahagagana dia mifototra amin'ny lafiny roa: ny endriky ny endriky ny tandoor sy ny fitaovana izay nanaovana azy.
Ny famokarana fofona vita amin'ny fandroana, tanimanga na fitaovana hafa mitovy amin'ny fitantanana ny fitantanana avo dia mihamafana avy ao anatiny ary manomboka mampihena tsikelikely ny hafanana, ary mampitombo ny sakafo homana.
Noho izany, ny sakafo dia tsy mafana, toy ny amin'ny afo, fa misy menaka manify, amin'ny làlana mankahala. Misaotra ireo toetra ireo fa ny tandoor dia tsy mitovy amin'ny barbarie.
Fantatrao ve? Ny fofona vita amin'ny fitaovana fitsaboana tsara dia ahafahanao manomana sakafo mandritra ny ora 6 aorian'ny famafazana azy. Ny fitaovana toy izany dia manana fiarovana mahery vaika amin'ny hafanana ary mamela ny hafanana ny rindrina ao amin'ny fatana mankany +400 ° С.
Miankina amin'ny tranokala fananganana ny tandoor, misy karazany maromaro. Diniho tsirairay amin'izy ireo.
Ho an'ny fandaminana ny faritra ambanivohitra dia ho liana ianao hianatra ny fomba hampisy rivo-maintso amin'ny tananao manokana, arias arika, tranom-borona vita amin'ny vato, loharano iray, loharano fanorenana, lalam-pasika, fomba fisafidianana zana-pahaizana zaridaina, fomba famokarana sofina avy amin'ny pallets, fandroana amin'ny fahavaratra.
Ny tendrontany dia manondro ny endrika mahazatra, mandritra ny fanamboarana azy dia apetraka eo amin'ny tetezana manokana vita amin'ny tanimanga, eo an-tampony. Mba hahazoana antoka ny hafanana ambony amin'ny rafitra, ny rindrina ivelany dia rakotra tanimanga matevina matevina.
Ho an'ny famokarana fofona miainga amin'ny tany dia misy fomba roa ampiasaina:
sary sokitra - Ny rindrin'ny lafaoro dia tokony ho 5 cm tsatoka farafahakeliny, eo am-pototry ny fitaovana izy ireo dia mampangotraka hatramin'ny 10 santimetatra, ary ety ambany dia manao lavaka 15x15 cm ambany izy ireo, izay manompo amin'ny fiposahan'ny rivotra madio sy ny fanesorana lavenona. Ny haben'io endri-javatra io dia: 55 santimetatra, diamond - 60 cm.
Belt method - mandritra ny fanorenana dia misy tanimanga mifangaro amin'ny volon'ondry na volon'ondry amin'ny rindrina mba hanamafy ny rindrina sy ny hafanana fanampiny. Aorian'izay, ny tanimanga dia hodiovina amin'ny milina hatramin'ny 6 cm ary miparitaka eny amin'ny tendrontany, amin'ny manosika sy mampihetsiketsika. Mety hahatratra hatramin'ny 70 santimetatra ny halavan'ny tandroka.
Ny tandandy na ny lavaka dia heverina ho ny antitra indrindra sy tsotra indrindra amin'ny endrika. Izy io dia vita amin'ny tanimanga, mialoha miaraka amin'ny fasika na chamotte.
Misy fepetra roa misy ny lafaoro eto an-tany:
Ho an'ny karazana voalohan-dry zareo, dia mandavaka lavaka misy lavaka maherin'ny 50 santimetatra izy ireo ary mahatratra 35 santimetatra ny halavany, izay vita amin'ny biriky. Ao amin'ny fanambanin'ny fanorenana, lavaka roa no natao mba ahafahana mandoro tsara.
Ny endriky ny lafaoro faharoa dia ny tandoor-kavina vita amin'ny taolam-paty. Ny tranok'aina toy izany dia natsipy tao anaty lavaka lavalava, ary ny tenda sisa tavela eo ambony. Eto ambany ny fitaovana manapotsipika rivotra manokana, izay aseho eo ambony.
Misy porofo fa nampiasaina talohan'ny vanim-potoana ny tandindom-pito.
Nipoitra vao haingana ny tandevon'ny portable, saingy efa nahavita nahazo laza malaza. Manana kofehy izy io ary vita amin'ny tanimanga mora simba na kôlônina.
Ho fampihetseham-po sy fampandrosoana, ny famolavolana ny lafaoro amin'ny andaniny roa dia feno metaly roa. Ao an-tampony, ny tendany dia mihidy miaraka amina coverage manokana roa, any amin'ny farany ambany dia misy fitomboka izay ilaina amin'ny famelomana ny lafaoro sy ny fanesorana arina.
Ny tanjon'ny tandoor dia tsotra, ka na ny tsy matihanina aza dia afaka miatrika ny fananganana azy. Mba hanombohana fananganana dia tokony hanomana fitaovana sy fitaovana mety ianao.
Ilaina ihany koa ny hahalalanao ny fomba hanamboarana oven holandey iray amin'ny tananao, ny endriky ny goroina, ny fomba fananganana ny lakalin'ny fototra, ny fomba tsara indrindra handaminana ny zaridaina ririnina, ny fomba fananganana bain, veranda, fomba fanaovana zana-pokonolona, ​​gazebo iray.
Azonao atao ny manamboatra ny tananao amin'ny tranokala mandritra ny faran'ny herinandro, raha manomana mialoha ny fitaovana sy fitaovana ilaina ianao. Ao anatin'ny dingan'ny asa no ilaina:
ny fahafaha-manamboatra mixes fanorenana;
trompetra 12 cm ny sakany;
mofomamy ho an'ny fametahana biriky amin'ny kodiarana diamondra;
fananganana sy ny fitsipika glas.
rano ary sira fanafody tsotra;
afo fire, biriky afo;
Amin'ity tranga ity, dia ny fananganana tandoor portable ho an'ny atody. Mba hanaovana izany dia mila manamboatra sehatra metaly boribory ianao amin'ny alàlan'ny kodiarana, ary ny diamondra dia mitovy mitovy amin'ny diam-penina amin'ny lafaoro lava.
Tandoor manao-it-tena: lahatsary
Toy ny dingana rehetra fanorenana, ny fananganana biriky biriky dia misy dingana maromaro:
Manao môdely hazo. Nofonosina ny rindrin'ny lafaoro, manamboatra kitapo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo, ny mari-pamantarana izay mifandraika amin'ny sehatra manokana ao amin'ny lafaoro: ny haavony - 75 cm, ny diamondotra anatiny - 40 santimetatra, ny ambany anaty - 60 santimetatra.
Fiomanana amin'ny fako ho an'ny fanorenana ny lafaoro. Ny haavon'ny tandoor avy amin'ny gorodona dia biriky telo mibaribary izay mila mamboly eo amin'ny fako. Mba hanaovana izany, mifangaro: rano, tanimanga chamotte ary sira ara-dalàna tsy tapaka. Ny vahaolana enti-mody dia mifangaro tsara mandra-pahatonga ny homogene, ny masony matevina, ny tsy fitoviana siramamy.
Brick laying. Ao anatin'ilay fiara efa nomanina teo aloha teo amin'ny kodiarana ao afovoan'ny fametrahana ny template. Aorian'izay, ataovy ny tranobenao brick: napetraka eo amin'ny sisiny, ao anaty faribolana, ny iray hafa. Rehefa vita ny faribolana, dia jereo ny haavon'ny rafitr'ilay rafitra. Mba tsy hamitahana azy, dia mifatotra amin'ny tady izany.
Walling. Amin'ny alalan'io fitsipika io ihany, ny fanovozana ny rindrina araka ny lamina, dia napetraka ny laharana biriky faharoa sy fahatelo. Rehefa mametraka ny takaitra fahatelo, izay manana faribolana lehibe indrindra, ny biriky voalohany dia tapaka amin'ny andaniny roa amin'ny endrika trapezoid ary napetraka eo ambany fery kely eo amin'ilay rafitra. Ny biriky manaraka aorian'izay dia voafetra ihany.
To face dandy. Mba hisorohana ny hafanana sy ny hafanana tsy ho afa-miala, ny rindrina ivelany ao amin'ny lafaoro dia rakotra tanimanga vita amin'ny clam chamotte misy spatula, avy any amin'ny farany ambany.
Drafitra fanadiovana. Mba hanamainana ny fatana, dia asio afo kely eo afovoany. Aorian'ny andro vitsivitsy dia vonona ny hiasa ny tandoor.
Zava-dehibe izany! Raha miala amin'ny fotoam-pialan-tsasatra ny rafitra, dia ilaina ny manamaivana ny sisintany amin'ny rafitra mba tsy hisorohana ny fananganana cracks sy chips.
Tandoor dia mari-pahatsiarovana mahagaga izay ahafahanao mahandro sakafo matsiro sy mamy: avy amin'ny mofo ka hatramin'ny kebab nentim-paharazana. Ny fitsangatsanganana ho an'ny jabora dia tsy voafetra amin'ny sokajy rehetra, eto dia azonao atao tsara ny mikarakara hena, trondro, legioma, manamboatra peo mahavariana ary mamokatra voankazo.
Ny sakafo mahandro ao anaty lafaoro dia tsara indrindra satria tsy mitaky fanaraha-maso tsy tapaka ny toetry ny vokatra, ny tena zava-dehibe dia ny mandinika amim-pitandremana ireo torolàlana momba ny fikarakarana ity vokatra ity.
Ny lovia nentim-paharazana natao tao amin'ny oven, mazava ho azy, dia mofo. Churek - Sakafo nasionaly, izay mofomamy misy ravina maina.
Ilaina ny fitaovana hanomanana azy:
koba - 500 g;
Hazo - 1 tbsp. l.;
siramamy - 1 tsp;
Esory ny koba ao amin'ireo entana ireo ary avelao aty toerana iray mafana mandritra ny adiny iray mba hahatongavana amin'izany. Aorian'izany, manaova mofo iray milanja 500-600 g ary alefaso any amin'ny oven. Ny mofomamy vita vita dia simenitra amin'ny atody ary voaharona amin'ny kimavo, izay manome azy ny aroma sy ny tsiro manokana.
Tsy misy lanjany, matsiro ary mahalavorary izany samsa miaraka amin'ny zanak'ondry.
Fa mila fiomanana izy:
rano - 550 ml;
koba - 1.5 kg;
mutton fat - 100 g;
sira - to taste;
vy (saka) - 1 kg;
sesame - 2 tbsp. l.;
tongolobe - 4-5 p.
fikarakarana fanafody - manandrana.
Zava-dehibe izany! Mba hanamboarana ny koba ny tsy fitoviana ilaina dia tokony homena 15 minitra farafahakeliny, mamadika ny sisiny amin'ny famantaranandro.
Technology of cooking samsa:
Avy amin'ny lafarinina, rano, tavy ary sira no mamay ny koba. Voasahiran-doko kely izy, ary avy eo dia lasa kobaka, ary avy eo dia misy mofomamy tsirairay avy.
Ny mofo vita amin'ny mofomamy dia mivoaka amin'ny tendrony tena izy, eo afovoany dia mametraka fofona vy, fofona sy tongolobe, ary manindrona ny sisiny eo afovoany.
Voa maina ny piesa ary natsipy tamin'ny seza.
Maniraka samsa ao anaty ganiela ary manondrahana izy ireo mandra-pambolena karôkôla mena.
Ny tandoor dia fitaovana manerantany izay ahafahanao mandany fotoana any amin'ny trano fonenana tsy hoe mahafinaritra sy mahaliana, fa mahafinaritra ihany koa. Ao amin'ny oven any atsinanana, dia afaka manamboara sakafo isan-karazany marobe izay hitarika ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Tsy manana fitaovana toy izany ve ianao? Tsy ilaina ny mihazakazaka amin'ny tsenan'ny fananganana toeram-pivarotana mba hahafahana mahazo azy, afaka manao haingana haingana ianao ary manao asa mahagaga miaraka amin'ny tananao, manatanteraka ny fepetra rehetra sy ny tolo-kevitr'ireo manam-pahaizana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Manangana tandoor ao amin'ny dacha izahay